Nei J-147 ichizivikanwa semushonga wakanyanya kurapa chirwere cheAlzheimer uye kupokana nekukwegura? - Shangke Chemical
Nei J-147 ichizivikanwa semushonga wakanyanya kurapa chirwere cheAlzheimer uye kupokana nekukwegura?
J-147 hupfu hwakavapo muna 2011 kuCellular Neurobiology Laboratory yeSalk Institute. Kubva payakatanga, pakave nezvakawanda zvidzidzo zvakasimbisa kushanda kwayo pakurapa chirwere cheAlzheimer uye kudzoreredza kukwegura.
Dr. Dave Schubert nevamwe vake vaongorori paSalk Institute vakatamba zvakakosha mukudzidza kweJ-147 curcumin. Mu2018, ivo neurobiologists vakafumura iyo J-147 mashandiro ekuita kweiyo nootropic uye nebasa rayo mukugadzirisa neurodegenerative hosha.
Kudzidza uye kutsvagisa kwechirwere ichi zvakavakirwa pakukosha kwazvo mukutungamira kwe Alzheimer's mamiriro. Nekudaro, vashandisi vane hutano vanga vachifarira maJ-147 mabhenefiti senge ekuvandudza ndangariro, kusimudzira kugona kwekudzidza, uye kumutsidzira kweeuroni.
Muna 2019, vanachiremba vakagadzirira kuyedza mushonga weJ-147 Alzheimer's kuvanhu.
Chii chinonzi Nootropic J-147 Powder?
J-147 powder inotora kubva ku curcumin uye Cyclohexyl-Bisphenol A. Mushonga wakangwara une zvese neuroprotective uye neurogenic zvivakwa. Kusiyana nemazhinji nootropics, J-147 anti-kuchembera kuwedzera inowedzera kugona pasina kukanganisa iyo acetylcholine kana phosphodiesterase enzymes.
Curcumin inhengo inoshamairira yeturmeric uye inobatsira mukubata neurodegenerative hosha. Nekudaro, iyi polyphenol haina kuyambuka iro reropa-uropi chipingaidzo zvinobudirira. Nekuda kweizvozvo, J-147 nootropic yakave yekupedzisira diki sezvo ichiyambuka iropa-yeuropi chipingaidzo zviri nyore.
J-147 Inoshanda Sei?
Kusvikira 2018, iyo J-147 mhedzisiro pane iyo sero yakaramba isinganzwisisike kusvikira iyo Salk Institute Neurobiologists yakanzwisisa dambanemazwi. Mushonga uyu unoshanda nekusunga kuATP synthase. Iyi protein mitochondrial inogadzirisa kugadzirwa kwesimba remagetsi, nekudaro, kudzora kukwegura.
Kuvapo kweJ-147 kuwedzera muhurongwa hwevanhu kunodzivirira huturu hunosanganidzana nezera hunokonzerwa nekusagadzikana kwemitochondria uye kuwedzerazve kweATP.
J-147 mashandiro ekuita ichawedzerawo iwo mazinga emaurotransmitter akasiyana siyana anosanganisira NGF neBDNF. Kunze kwezvo, inoshanda pamatanho e beta-amyloid, ayo anogara akakwirira pakati pevarwere vane Alzheimer's uye kuora mwoyo.
J-147 mhedzisiro inosanganisira kudzora kufambira mberi kwe Alzheimer's, kudzivirira kushomeka kwendangariro, uye kuwedzera kugadzirwa kwemasero emitsipa.
Izvo Zvakanakira Kubatsira kweJ-147
J-147 yekuwedzera inowedzera nzvimbo uye yenguva refu ndangariro. Mushonga unodzosera kukanganisa kwekuziva pakati pevakura vari kunetsekana nekukanganisa kwekuziva. J-147 yekutengesa inowanikwa seyedhi-the-dhiza uye chizvarwa chevechidiki chiri kuitora kusimudzira kugona kwekudzidza.
kutora J-147 anti-kuchembera zvinodhaka zvinowedzerawo ndangariro, kuona, uye kujekesa kwepfungwa.
Kutungamira kweAlzheimer's Disease
J-147 inobatsira varwere vane Alzheimer nekudzora kudzikisira kwemamiriro acho. Semuenzaniso, kutora iyo kuwedzera inodzikisira pasi iwo mazinga eunyunguduka beta-amyloid (Aβ), zvichitungamira mukuziva kusagadzikana. Kunze kwezvo, J-147 curcumin modulates neurotrophin signaling kuvimbisa neuronal kupona, saka, ndangariro kuumbwa uye kugona.
Varwere vane AD vane zvishoma zvishoma neurotrophic zvinhu. Zvisinei, kutora J-147 Alzheimer's supplement kunowedzera zvose NGF neBDNF. Aya maurotransmitter anobatsira ndangariro kuumbwa, kudzidza, uye nekuziva mabasa.
J-147 nootropic inodzivirira kufa kweroni kunokonzerwa nekushushikana kweiyo oxidative.
Ichi chekuwedzera chinodzivirira zvakare kuita kwakawanda kweNMDA (N-Methyl-D-aspartate) receptors, inoitisa neurodegeneration.
Kutora J-147 chinodhaka kuchawedzera huropi-hwakatorwa neurotrophic zvinhu (BDNF) uye nehutano hwekukura zvinhu (NGF). Aya maurotransmitter maviri anotyaira pasi neurodegenerative hosha dzakadai seAlzheimer's uye dementia. Uyezve, BDNF yakakosha mune neurogeneis.
Inovandudza Basa reMitochondrial
Kutora mushonga weJ-147 kunovandudza zvisina kunangana matanho eATP nekusimudzira mabasa emitochondrial.
Kukwegura kunokonzera kuderera kwemitochondria nekuda kwekusagadzikana uye kuwedzera kwemarudzi eoksijeni anoshanda. Zvisinei, J-147 kuwedzera inorwisa iyi nzira nekudzivisa ATP5A synthase. Zviverengero zvidzidzo zvinoverengera pamushonga wekuwedzera hupenyu hwemunhu.
J-147 uye Anti-kuchembera
Sekureva kweSalk Researchers, J-147 anti-kuchembera yekuwedzera inoita kuti maseru ekukwegura aite sevechidiki.
Dysfunctional mitochondria inowedzera kukwegura. Cellular homeostasis inoderedza, nekudaro, kuderera kwehupenyu chiitiko. Kunze kwezvo, kukuvara kwemasero uye kuderera kwemitochondrial kuchaitika nekuda kwekugadzirwa kweROS (inoshanda oxygen mhando) Kutora J-147 poda kuchapokana nemhedzisiro iyi, nekudaro, kudzikisira senescence.
Kukwegura kunosanganisirwa nekuziva kwekudzikira uye kusagadzikana kweurourogenerative. Nekudaro, akati wandei J-147 zviitiko simbisa kushanda kwemushonga mukudzora ndangariro kurasikirwa, kugadzirisa kugona kwekuziva, uye kurapa kuora mwoyo, Alzheimer's, nezvimwewo zvirwere zvine chekuita nezera.
Dosi Yakajairwa yeJ-147
(1) Yakajairwa dosi
Iyo yakajairwa zuva nezuva J-147 muyero unorara pakati pe5mg uye 30mg. Unogona kupatsanura iyo J-147 muyero kuva maviri. Zvichida, dosi rako rinofanirwa kunge riri pazasi renji uye riwedzere richisimudzira pakushivirira kwemuviri wako.
Iyi yekuwedzera inoshanda nemuromo. Iwe unofanirwa kurega kuitora gare gare manheru kana husiku nekuti mamwe maJ-147 ongororo anoti anogona kukanganisa maitiro ako ekurara.
(2) Murwere muyero
Vatsvagiri vakashandisa 10mg / kg yeJ-147 dosage kurapa Alzheimer's chirwere mumakonzo mhando.
Zvisinei, muyero wako unofanirwa kuenderana nemamiriro ako. Tora, semuenzaniso, kana iwe uri mushure mekuvandudza kugona kwako, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekutora 5mg kusvika 15mg. Kupesana, kwekuchengetedza kwetsinga uye manejimendi eurourogenerative kusagadzikana, unogona kukwidziridza iyo dosi kusvika kune 20mg uye 30mg.
In J-147 kiriniki miedzo, izvo zvidzidzo zvaizotora dhivha nekukurumidza mushure mekukurumidza kwe8-awa yekutsanya.
Musiyano uripo pakati peJ-147 naT-006
T-006 yakabva kuna J-147 nootropic. Iyo mukomboni yakagadzirirwa nekutsiva methoxyphenyl boka reJ-147 curcumin poda ne tetramethylpyrazine.
Kuwedzera ne T-006 kweinosvika mwedzi mitatu ichaderedza hutsi hwehuropi uye kuwedzera simba rese. Zvakare, hupfu hunowedzera mazwi acuity uye hunoita kuti mushandisi adzikame. Kupesana, J-147 zviitiko zvinosanganisira zvakagadziriswa ndangariro, kuona, uye kunhuwidza.
Kunyangwe paine misiyano isingakoshe, iwo ekuwedzera maviri ane mhedzisiro yakafanana.
Ko J-147 yakachengeteka kana uchishandisa?
J-147 mushonga wakachengeteka. Yakabudirira kupfuudza kuyedzwa kweiyoxicology mumiedzo yemhuka sezvinodiwa neKudya neDrug Administration (FDA). Kunze kwezvo, J-147 kiriniki miedzo yanga ichienderera kwenguva yakati.
Iko hakuna zvinyorwa zvekushata J-147 mhedzisiro mune ese ekumberi uye ekuedzwa kwevanhu.
J-147 kiriniki kuyedzwa
Chikamu chekutanga cheJ-147 kiriniki kutongwa kwakatangwa kutanga kwe2019 sekutsigirwa naAbrexa Pharmaceuticals, Inc. Chinangwa chechidzidzo ichi chaive chekuyera kuchengetedzeka nekushivirira kwekutora iyo nootropic, uye yayo pharmacokinetic zvivakwa mune zvine hutano zvidzidzo.
Chidzidzo chekiriniki chaisanganisira vese vadiki nevakuru. Iri boka rekutsvagisa raive rakasarudzika, kaviri-bofu, uye placebo-inodzorwa neiyo imwe yekukwira doses.
Pakupera kwekuyedzwa kwevanhu, vesaenzi vanofanirwa kumisikidza mhedzisiro zvichibva pamhedzisiro yakaipa, kurova kwemoyo uye mutinhimira, shanduko yemuviri, uye J-147 mabhenefiti pane yetsinga system.
Wongororo yemushandisi / zviitiko mushure mekushandisa J-147
Heano mamwe emamwe maJ-147 ongororo;
Iye Capybara anoti;
“… Panogona zvakare kuve nekunzwa kwesimba rakawandisa pakutanga. Kwete caffeine kana amphetamine mhando yesimba, asi zvakanyanya simba rechisikigo. Ndakafarira chikamu ichi sezvo ini ndaikwanisa kufunga nezvekuita chimwe chinhu senge kuchovha bhasikoro, ndozozviita pasina kana kuzeza kana kuzvishingisa kuti nditange. Kukurudzira ini kwaive kushoma. Izvi zvakaparara mushure memavhiki mashoma, uye ini ndichifarira manzwiro aya, mamwe anogona, uye saka ndiri kunyora izvi semhedzisiro inogona kuitika. ”
“Inotaridza senge nootropic inonakidza uye inovimbisa. "Sezviri pachena pakanga paine kiriniki yekudzidza kuUS gore rapfuura."
Mumwe mushandisi anoti;
“Okay, ndakaiwana nezuro uye ndanwa 10mg for 3 doses already. Ndakaitora zvishoma nezvishoma uye yakanyungudika zvakanaka. Hazvina kunaka zvakaipa. Pakarepo mhedzisiro yakatanga nekukurumidza kwazvo kwandiri. Chiono changu nepfungwa zvaiita kunge zvakasimbiswa neimwe nzira, asi inogona kunge iri placebo chete. Hazviratidzike sekunge zvine chekuita nezvakashata zvachose, asi zvakanyanyokurumidza kutaura… ndakanzwa zvese zvakanaka uye ndakasimbiswa zuva rese nemumwe 10 mg mangwanani mangwanani nenguva dza6 mangwanani. ”
"Ndinoramba ndichitora J147 pasina rubatsiro runoratidzika kunze kwekuderedza kuzvimba uye kuzvimba zvakambotaurwa."
Ndekupi kwatingawane J-147 poda?
Hunhu hweiyi nootropic ichiri pfupa rekukakavara asi hazvizokutadzise kuwana zvigadzirwa zviri pamutemo. Shure kwezvose, J-147 Alzheimer's kiriniki miedzo iri kuitika. Unogona kutenga hupfu muzvitoro zvepamhepo sezvo iwe uchiwana mukana wekuenzanisa mitengo yeJ-147 kune vatengesi vakasiyana. Nekudaro, iwe unofanirwa kuve neshuwa yekutenga uchitenderera kubva kune vanoshanda vatengesi vane yakazvimirira marabhoritari kuyedzwa.
Lapchak, AP, Bombien, R., uye Rajput, SP (2013). J-147 Novel Hydrazide Lead Compound yekurapa Neurodegeneration: CeetoxTM Kuchengetedza uye Kuongorora kweGenotoxicity. Zvinyorwa zveNeurology uye Neurophysiology.
Asati, M., et al. (2013). Iyo Neurotrophic Compound J147 Inodzoreredza Kukanganisika Kwekuziva muKweguru Alzheimer's Zvirwere Mbeva. Ongororo yeAlzheimer & Therapy.
Chirwere cheAlzheimer Chinodzosera Clock MuPowerhouse yeSeru. Salk Institute.January 8, 2018.
Qi, Chen., Et al. (2011). Iyo Novel Neurotrophic Mushonga weCognitive Enhancement uye Alzheimer's Chirwere. Ruzhinji Raibhurari yeSainzi.
Daugherty, DJ, et al. (2017). Iyo Novel Curcumin Yakagadziriswa yekurapa kweDhiabetic Neuropathy.
Kuseka, Lian., Et al. (2018). Anti-kuora mwoyo-senge Mhedzisiro yeNovel Curcumin Derivative J147: Kubatanidzwa kwe5-HT1A Neuropharmacology.
RAW J-147 PUPA (1146963-51-0)
2.Chii chinonzi Nootropic J-147 Powder?
3. J-147 Inoshanda Sei?
4. Izvo Zvakanakira Kubatsira kweJ-147
5.J-147 uye Anti-kuchembera
6.Standard Dose yeJ-147
7. Musiyano uripo pakati paJ-147 naT-006
8.I J-147 yakachengeteka here kana uchishandisa?
9.J-147 kiriniki kuyedzwa
10.Use ongororo / zviitiko mushure mekushandisa J-147
11.Tingawane kupi J-147 poda?